Mas’uuliyiin iyo wax garad ka kala socda qeybaha bulshada oo B/weyne ugu qul qulalaya si isdaba joog ah tacsida ugaas C/raxmaan ugaas khaliif awgeed. | WARSOM.COM - Wararka Soomaaliya,warka soomaaliya,Somalia News
Home Macluumaadka GMDQ & Xisbiyada Mas’uuliyiin iyo wax garad ka kala socda qeybaha bulshada oo B/weyne ugu...
Mas’uuliyiin iyo wax garad ka kala socda qeybaha bulshada oo B/weyne ugu qul qulalaya si isdaba joog ah tacsida ugaas C/raxmaan ugaas khaliif awgeed.
Tan iyo wixii ka dambeeyay markii uu maalintii shalay ahayd uu geeriyooday Ugaas C/raxmaan Ugaas Khaliif Ugaas Rooble, waxaa is-daba-joog u soo gaarayay Magaalada Beledweyne ee xarunta Gobolka Hiiraan, Wufuud kala gadisan kuwaasoo ka qayb-qaadanaya tacsida iyo qaban-qaabada aaska Ugaaska.
Maanta waxaa garoonka diyaaradaha Baladweyne ee Ugaas Khaliif kasoo dagay wafdi uu hoggaaminayo wasiirka wasaarrada arrimaha gudaha iyo federaalka xukuumadda Somalia, C/raxmaan Max’ed Xusseen Odawaan, waxaana wafdiga qeyb ka ah ugaasyo, salaadiin iyo Wax-garad Soomaaliyeed oo ka qayb-qaadanaya baroor-diiqda geerida ugaaska oo si weyn looga naxay.
Wafdiga maanta soo gaaray Baladweyne ayaa waxaa ka mid ahaa; Wasiirka dhallinyarada iyo cayaaraha, kan kalluumeysiga iyo kheyraadka badda, wasiir-u-dowlaha madaxtooyada, wasiiru-dowlaha maaliyada, xildhibaanno iyo mas’uuliyiin kale oo ka tirsan labada gole ee dowladda federaalka.
Dhinaca Duubabka, waxaa wafdiga ka mid ah Ugaas Max’uud Ugaas Cali, Ugaas C/llaahi Ugaas Fara-cadde, Ugaas C/raxmaan Ugaas C/llaahi, Ugaas Cismaan Ugaas Cilmi, Ugaas Cabdulllaahi Ugaas Saalax, Ugaas Abuukar Ugaas Xasan, Malaaq Cali Malaaq Maxamed, Suldaan Buube, Ugaas Cali Ugaas Xassan, Ugaas Cabdi Ugaas Max’ed, Ugaas Cabdxakiin Ugaas Max’ed, iyo waxgarad kale kuwaa oo dhamaantood u yimid magaalada Beledweyne tacsida Ugaas C/raxmaan Ugaas Khaliif Ugaas Rooble oo maalintii shalay geeriyooda.
Wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka ayaa sheegay in saddex casho ah dib loo dhigay shirkii lagu waday inuu ka furmo magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Sh/dhexe oo sida uu hadalka u dhigay qorshuhu ahaa in berri si rasmi ah loo furo.
Ugu dambeyn, Meydka Ugaaska ayaa lagu wadaa in maalinta berri ah lagu Aaso (Daaro-Ugaas) oo ku dhaw deegaanka Halgan ee gobolka Hiiraan, halkaasoo ay ku aasan yihiin 17 Ugaas oo uu ka mid yahay Ugaas Khaliif Ugaas Rooble.
Previous articleWasiirka amniga iyo wufuud uu hugaaminayo oo gelinkii danbe ee manta ka degey B/weyne.
Next articleSucuudiga ayaa xiriirka u jarey eeraan iyo IRAN oo si adag uga hadashey ficilka sucuudiga.